Ndị na-egbu egbu ghọrọ ndị Burgers - iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Ndị na-egbu egbu Gbanwere Ndị ahụ
Ndị na-egbu egbu Gbanwere Ndị ahụ
by Piper St. James October 27, 2019 5,055 echiche
Onye na-egbu ọbọ Joe Metheny malitere iwe ya mgbe nwunye ya kpọọrọ nwa ha wee gbapụ na Baltimore, Maryland. Nke a bụ ebule bidoro ya niile.
Mgbe e jidere Metheny na 2016 o kwupụtara mpụ ya, ma taa ya ahụhụ na-ewe ya maka ịbọ ọbọ na nwunye ya na nwoke ọ hapụrụ ya. Agbanyeghị, ọ bụ iwe a kere ma nyekwa ihe miri emi n'ime ya.
Ọ bụ ezie na iwe kpaliri ozi ya, Metheny hụrụ ọtụtụ ndị ọ metụtara bụ ndị ọ hụrụ na ha gafere ụzọ ya na ndụ. Dị ka ụzọ maka iwe na iwe ya nke ịbụ onye a gbahapụrụ n'oge na-adịbeghị anya, di nweburu obi ụtọ chọrọ mgbapụta maka iwe ya; ọpụpụ ahụ bụkwa igbu ọchụ, ndina n'ike, na iwepụ mmadụ.
Ọtụtụ n’ime ndị ikom na ndị inyom a ndị hụrụ onwe ha n’ebe na-ekwesịghị ekwesị n’oge adịghị mma bụ ndị na-akpafu, ndị na-enweghị ebe obibi, na ndị akwụna. Ndị mmadụ na-enweghị onye ga-achọpụta na ha apụọla ma ọ bụ na-efu efu.
Nke a nwere ike ịdị ka akụkọ ị nụrụ n'oge gara aga, mana ihe ekewapụrụ Metheny na onye na-egbu gị "nkịtị" bụ otu o si ewepụ ozu ndị ọ na-amaghị.
Metheny gbupụrụ ahụ ha, chịkọta anụ ha na anụ ha, wee gwakọta ya na anụ ezi na anụ ehi ọ na-eji eme hamburgers. Ọ ga-erezi hamburgers ndị a n'akụkụ okporo ụzọ ya.
Ogbu mmadu kwuru na aru nwere uto yiri ya na ezi. O kwuru, sị: “Ọ bụrụ na ị gwakọta ya ọnụ [ya bụ, anụ ala] ọ dịghị onye ga-ama ihe dị iche.” N'ezie, enweghi onye ahịa ọ bụla, na onye na-azụ ahịa mpụ ya, mere mkpesa banyere uto nri ha.
Banyere akụkụ ahụ ndị na-ekwesịghị ekwesị maka enyemaka hamburger, Metheny liri ha n'ụgbọala nnukwu ụgbọala.
Ọ dị ka mpụ ya abụghịzị ịbọ ọbọ. Kama nke ahụ, mgbe friza Metheny dara, ọ ga-apụ chọọ mkpụrụ obi ọzọ nke na-achọ ihe pụrụ iche na hamburgers ọ na-ejere ndị ahịa ya. O gosipụtara na ọ nwere ezigbo uto maka igbu ọchụ.
Oge e jidere ya, o kwuru na ya gburu mmadụ iri. Ọ gwara ndị ọchịchị, "Naanị ihe na-ewute m na nke ọ bụla n'ime ihe a bụ na egbughị m igbu ndị nne na nna abụọ ahụ m na-achọ mgbe ahụ, nke ahụ bụ nwanyị ole na ole na nwanyị nzuzu ọ na-arahụ."
Metheny nọrọ naanị afọ iri n'ụlọ mkpọrọ mgbe ọ nwụsịrị mkpọrọ afọ abụọ na-enweghị nkwenye maka igbu ọchụ nke Kathy Spicer na Cathy Ann Magaziner.
N’afọ 2017 onye nche ụlọ mkpọrọ hụrụ ya n’otu ọnụ ụlọ mkpọrọ. Ọ dị afọ iri isii na abụọ.